iOS 11.2 Beta 3 inowedzera shanduko uye inojekesa kusahadzika nezveWiFi neBluetooth | IPhone nhau
iOS 11.2 Beta 3 inowedzera shanduko uye inojekesa kusahadzika nezveWiFi neBluetooth
Apple ichangoburitsa yechitatu Beta yeIOS 11, vhezheni nyowani yeiyi inotevera yekuvandudza iyo parizvino inongowanikwa kune vanogadzira, uye mune iyo yatakatomboona shanduko dzakaitwa mune yapfuura Betas. Asi iyi yazvino Beta 3 inowedzera zvimwe zvigadziriso zvine chekuita nenzvimbo yekudzora mune iyo iPhone X uye neiyo "inoshamisa" mashandiro eWiFi neBluetooth mabhatani.
Iyo iPhone X inoshandura zvimwe zvinongedzo kusvika parizvino zvakagadzirirwa mashandiro akaita seControl Center, iyo inotsausa vamwe vashandisi pavanotanga kushandisa iyo nyowani smartphone, iyo nekuparadzira neyekutanga bhatani kunosimbisa mashandiro ayo pane kubata kwekubata pachiratidziri. Saka Apple inoita kunge iri kupa iOS 11.2 kutsanangurira vashandisi vayo dzimwe shanduko dzakaitwa, uye isu tichakuudza nezvazvo pazasi.
Kune rimwe divi, isu tine chiratidzo chekuratidza nzvimbo yekudzora pane iyo iPhone X. Kusvika ikozvino, dambudziko rakaramba richisvetuka kubva kuzasi kwechidzitiro zvichikwira, zvese pahwindo rekiyi uye pane huru desktop kana mukati meimwe application. . Ichi chiratidzo chave kushandiswa neiyo iPhone X kuvhara mashandisirwo kana kuvhura multitasking, saka muchinhu ichi nzvimbo yekudzora inoratidzwa nekutsvedza pasi kubva ku "runyanga" kurudyi, kwatinowana bhatiri, kufukidza uye neiyo WiFi icon. Ipapo chaipo ndipo apo Apple yakaisa chiratidzo chidiki kutiyeuchidza nezve chiitiko ichi. Iyo chiratidzo chinongoonekwa chete pane yekuvhara skrini.
Shanduko yechipiri ndeyechokwadi kujekeswa. Mavhiki mashoma apfuura takakutsanangurira mashandiro ebhatani reWiFi neBluetooth muIOS 11, mushure mekunyunyuta kwevashandisi vazhinji vakati havana kushanda nemazvo, kana chiri chokwadi kuti Apple yachinja maitiro. Kana iwe uchida kuziva zvese ruzivo rweiyi shanduko iwe unayo mukati ichi chinyorwa, asipple akapfupikisa shanduko mumawindo maviri ayo anozoonekwa kana iwe uchibvisa Bluetooh neWiFi mushure mekuvandudza kuIOS 11.2.
Dzimwe shanduko dzinosanganisirwa muIOS 11.2 ndeye Apple Kubhadhara Cash, mapikicha matsva ehupenyu eiyo X X, iyo bug inogadzirisa iyo tsamba "ini" uye iyo isina kugadzirisa uye nekumwe kuita kwekuvandudza. Kana isu tikaona kuvandudzwa kunoshamisa, isu tinokuudza nezvazvo senguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2 Beta 3 inowedzera shanduko uye inojekesa kusahadzika nezveWiFi neBluetooth
Maitiro ekugadzira kavha yekumashure yeiyo iPhone X yakajeka
Kuwedzera kweApple Kudzoka Chirongwa Kicks Kubva Mbudzi 25